ဆံပင်ကျွတ်တဲ့အထိ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ Song Joong Ki
June 28, 2019 Cele Love 0
ဆံပင်ကျွတ်တဲ့အထိ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ Song Joong Ki Song Joong Ki နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အတွင်းလူတစ်ယောက်ကတော့ Song Joong Ki ဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ကြုံခဲ့ရတာကြောင့် ဆံပင်တွေကျွတ်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် နော် …. Song […]
ကားချောက်ထဲကျတဲ့မိဘတွေအတွက်သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ကောင်းထက်ဇော် မိဘတွေ ကံနိမ့်နေလို့ သာသနာ့ဘောင်ထဲ ခဏ ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းထက်ဇော်Channel7ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ မိသားစုပြိုင်ပွဲ ၊ Money Drop (ငွေတွေဝင်) စတဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင် အခြားသော အစီအစဉ်များစွာနဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ပါဝင်သူက ကောင်းကြီး (ခေါ်)ကောင်းထက်ဇော် ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကို […]
ကြက်သွန်ဖြူကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားပြီး အိပ်ရင် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၅) ခု
ကြက်သွန်ဖြူကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားပြီး အိပ်ရင် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၅) ခု ကြက်သွန်ဖြူဟာ အနံ့ပြင်းတဲ့ အစားအစာတစ်ခုလို့ တော်တော်များများက သိထားပြီး တစ်ချို့တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာလည်း တွယ်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပြီး ရောဂါပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး၊ ကိုလက်စထောကို လျှော့ချပေးကာ အရွယ်မတိုင်ခင် […]
ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးကို တောင်ပေါ်ကတွန်းချလုပ်ကြံပြီးပိုင်ဆိုင်မှုဆက်ခံရန် ကြိုးပမ်းသည့်အမျိုးသား
ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးကို တောင်ပေါ်ကတွန်းချလုပ်ကြံပြီးပိုင်ဆိုင်မှုဆက်ခံရန် ကြိုးပမ်းသည့်အမျိုးသား ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း ဖထမ် အမျိုးသားဥယျာဉ်ကို အလည်အပတ်လာ တဲ့ တရုတ်ခရီးသည်အမျိုးသား ယုရှောင် တုံက ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးဖြစ်တဲ့ ဝမ်နန်ကို ပေ ၁၁၀အမြင့်ရှိတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်က နေ တွန်းချလုပ်ကြံခဲ့တာကြောင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူခံလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဇနီးဖြစ်သူ တောင်ထိပ်ကနေ မတော်တဆပြုတ်ကျ […]
ကြည်နူးမှု၊ လွမ်းဆွေးမှုတွေ တစ်ခေါက်ပြန်လည်ခံစားစေမယ့် SONG SONG COUPLE ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး
ကြည်နူးမှု၊ လွမ်းဆွေးမှုတွေ တစ်ခေါက်ပြန်လည်ခံစားစေမယ့် SONG SONG COUPLE ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်စုံတွဲတွေများစွာထဲမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့စုံတွဲလေးကတော့ Song Joong Ki နဲ့ Song Hye Kyo တို့ပါပဲ။ ဇာတ်ကားအတူရိုက်ကူးရင်းကနေတဆင့် တွေ့ဆုံချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတဲ့ သူတို့ ၂ […]
တဖက်သတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကွာရှင်းသတင်းကြောင့် ဘန်ကောက်ကနေ ချက်ချင်း ပြန်လာခဲ့တဲ့ အွန်စော
တဖက်သတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကွာရှင်းသတင်းကြောင့် ဘန်ကောက်ကနေ ချက်ချင်း ပြန်လာခဲ့တဲ့ အွန်စော ဒီနေ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံတွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ သတင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တောင်ကိုရီးယာားနိုင်ငံရဲ့ စံပြစုံတွဲလေး ဆောင်းဂျွန်ကီနဲ့ ဆောင်းဟေဂျိုတို့ရဲ့ ကွာရှင်းတော့မယ် ဆိုတဲ့သတင်းဟာ လက်ရှိမှာ ပရိသတ်အများအတွက် အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသလို အရမ်းလည်း အံ့သြမိစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို မင်းသားဆောင်းဂျွန်ကီ […]
ထိုင်းမလေးများ နှစ်ခြိုက်စွာအသုံးပြုနေကြတဲ့ ထိုင်းရိုးရာ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း (၅)မျိုး
ထိုင်းမလေးများ နှစ်ခြိုက်စွာအသုံးပြုနေကြတဲ့ ထိုင်းရိုးရာ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း (၅)မျိုး မိန်းကလေးတိုင်းက ကြည်လင်လှပတဲ့ အသားအရေ၊ ပိုးသားလေးလို လှပတဲ့ဆံကေသာမျိုးကို လိုချင်ကြပါတယ်။ မိတ်ကပ် မလိမ်းထားရင်တောင် သဘာဝအတိုင်းလှနေဖို့ဆိုရင် အသားအရေထိန်းသိမ်းတာကို နေ့တိုင်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်ပေးသွားဖို့လိုပါတယ်။ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက ထိုင်းနိုင်ငံက မိန်းကလေးတွေရဲ့ ထိုင်းရိုးရာ သဘာဝအသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် နော် […]
လူတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ နေလိုက်တဲ့အခါ ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူး (၇) ခု
လူတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ နေလိုက်တဲ့အခါ ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူး (၇) ခု လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေထိုင်ကြရတာဖြစ်တာကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝမှုမထားလို့တော့ မရပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်သင့်သလောက်တော့ ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုပေမယ့် လွန်ကဲစွာ ဂရုစိုက်ခြင်းကလည်း မကောင်းပါဘူး။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ လူတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲနေလိုက်တဲ့အခါ၊ ဂရုစိုက်မှုကို […]
မင်းသား ဆောင်းဂျွန်ကီ အနုပညာအလုပ်တွေ အားလုံးကနေ ခဏတာ ရပ်နားလိုက်ပြီတဲ့….
မင်းသား ဆောင်းဂျွန်ကီ အနုပညာအလုပ်တွေ အားလုံးကနေ ခဏတာ ရပ်နားလိုက်ပြီတဲ့…. လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေသလို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ဆယ်လီစုံတွဲဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဂျွန်ကီ နဲ့ ဆောင်းဟေဂျိုရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်ပြီး လမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့ ကာယကံရှင် ဆောင်းဂျွန်ကီ နဲ့ ဆောင်းဟေဂျို […]
“အိပ်ယာထဲမှာတင် ထိရောက်လွယ်ကူစွာ အဆီချနိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်း”
“အိပ်ယာထဲမှာတင် ထိရောက်လွယ်ကူစွာ အဆီချနိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်း” တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ဖို့အတွက် ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Gym မသွားနိုင်ပဲနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းလဲအောင် လုပ်လို့မရဘူးလို့ ယုံကြည်နေကြလို့ပါ။ တကယ်တော့ သင့်မှာသာပြောင်းလဲချင်စိတ်ရှိရင် ကိုယ်ရဲ့အိမ်မှာပဲ လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ပြီး လိုချင်တဲ့အချိုးအစားရအောင် ကြိုးစားလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရင်း လိုချင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစား ရနိုင်းကြောင်းကိုလည်း အချို့သောမော်ဒယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင် […]